WEGHACHITE PASWỌỌDỤ WINDOWS 7 SITE NA &QUOT;AKARA IWU&QUOT; - WINDOWS - 2019
Olee otú iji tọgharịa paswọọdụ nke Windows 7 site na "akara iwu"
Mgbe anyị na weebụsaịtị dị iche iche, anyị na-ahụkarị okwu mba na ahịrịokwu. Mgbe ụfọdụ, ọ ga-adị mkpa iji gaa mba ọ bụla mba ọzọ. Ma ọ bụrụ na enweghi asụsụ kwesịrị ekwesị n'azụ, mgbe ụfọdụ, nsogbu nwere ike ịda na nghọta nke ederede ahụ. Ụzọ kachasị mfe iji sụgharịa okwu na ahịrịokwu na ihe nchọgharị bụ iji onye nsụgharị ma ọ bụ onye ọzọ sụgharịa ya.
Esi sụgharịa ederede na Yandex Browser
Iji sụgharịa okwu, ahịrịokwu, ma ọ bụ peeji nke niile, Yandex. Ndị ọrụ nyochaa adịghị mkpa ịkpọtụrụ ngwa ndị ọzọ na ndọtị. Ihe nchọgharị ahụ nwere onye nsụgharị nke ya, nke na-akwado ọtụtụ asụsụ dị iche iche, gụnyere ọ bụghị ndị kachasị ewu ewu.
Usoro nsụgharị ndị a dị na Yandex Browser:
Nkọwa okwu: isi na ihe ndị dị gburugburu, bọtịnụ, ntọala na ihe ederede ndị ọzọ nwere ike sụgharịa gaa n'asụsụ ahụ ịhọrọ;
Onye nsụgharị nke edere ederede: onye sụgharịrị ụlọ ọrụ na Yandex sụgharịrị okwu, ahịrịokwu ma ọ bụ paragraf zuru ezu nke onye ọrụ ahụ na-asụ n'ime sistemụ arụmọrụ yana n'ime ihe nchọgharị ahụ;
Ntugharị nke ibe: mgbe ị gara saịtị ndị ọzọ ma ọ bụ saịtị ndị Russian, ebe ọtụtụ okwu na-amaghị ama n'asụsụ mba ọzọ, ị nwere ike iji aka gị ma ọ bụ jiri aka gị sụgharịa akwụkwọ ahụ dum.
E nwere ọtụtụ ụzọ isi sụgharịa ederede mba ọzọ, nke a na-achọta na ihe dị iche iche nke Intanet. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịsụgharị Yandex.Browser n'onwe ya na Russian, ya bụ, bọtịnụ, interface, na ihe ndị ọzọ nke ihe nchọgharị weebụ, mgbe ahụ adịghị mkpa onye nsụgharị ebe a. Iji gbanwee asụsụ nke nchọgharị n'onwe ya, enwere nhọrọ abụọ:
Gbanwee asụsụ nke sistemụ arụmọrụ gị.
Site na ndabara, Yandex. Ihe nchọgharị na-eji asụsụ arụ ọrụ na OS, sitekwa na-agbanwe ya, ị nwekwara ike ịgbanwe asụsụ nchọgharị.
Gaa na mwube ihe nchọgharị gi ma gbanwe asụsụ.
Ọ bụrụ na, mgbe nje ma ọ bụ maka ihe ndị ọzọ, asụsụ ahụ agbanweela na ihe nchọgharị ahụ, ma ọ̄ bụ gị, kama nke ahụ, chọrọ ịgbanwe ya site na nwa amaala ọzọ, wee mee ihe ndị a:
Detuo ma kpoo adreesị na-esonụ n'ime ebe nkesa:
nchọgharị: // ntọala / asụsụ
N'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ, họrọ asụsụ ị chọrọ; n'akụkụ aka nri nke windo ahụ, pịa bọtịnụ elu iji sụgharịa ihe nchọgharị ahụ;
Ọ bụrụ na ọ bụghị na listi ahụ, wee pịa bọtịnụ na-arụ ọrụ naanị n'aka ekpe;
Site na ndetu ndepụta, họrọ asụsụ a chọrọ;
N'akụkụ aka ekpe nke windo ahụ, a ga-ahọrọ asụsụ ahụ agbakwunyere na-akpaghị aka; iji tinye ya na nchọgharị ahụ, ịkwesịrị ịpị "Emeela";
Iji onye nsụgharị wuru ewu
E nwere nhọrọ abụọ maka ịsụgharị ederede na Yandex Browser: nsụgharị nke okwu na ahịrịokwu ọ bụla, yana nsụgharị nke ibe weebụ niile.
Maka nsụgharị nke okwu ọbụla na ahịrịokwu bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ụlọọrụ dị iche iche wuru n'ime ihe nchọgharị ahụ.
Iji weputa isi okwu na okwu ole na ole.
Pịa bọtịnụ bọtịnụ na triangle n'ime nke na-egosi na njedebe nke ederede ahọrọ.
Ụzọ ọzọ ị ga-esi sụgharịa otu okwu bụ ịkwanye ya na kọntaktị òké ma pịa igodo. Mgbanwe. A ga-eme ka okwu ahụ pụta ìhè ma sụgharịa ya na akpaghị aka.
Translation nke ibe
Enwere ike ịsụgharị saịtị ndị ọzọ. Dịka iwu, nchọgharị na-achọpụta na-akpaghị aka asụsụ asụsụ, ma ọ bụrụ na ọ dị iche na nke nke nchọgharị ahụ na-agba, a ga-enye nsụgharị:
Ọ bụrụ na ihe nchọgharị ahụ adịghị enye ịkọgharị na peeji nke, dịka ọmụmaatụ, n'ihi na ọ bụghị na asụsụ mba ọzọ, mgbe a, a ga-eme nke a n'otu n'otu.
Pịa na peeji efu nke ibe ahụ na bọtịnụ òké aka.
Na ndokwa menu nke gosipụtara, họrọ "Gbasara Russian".
Ọ bụrụ na nsụgharị adịghị arụ ọrụ
Ọ na-abụkarị na onye nsụgharị adịghị arụ ọrụ n'ọnọdụ abụọ.
Ị nwere nkwarụ nke nsụgharị okwu na ntọala
Iji mee ka onye nsụgharị gaa "NchNhr" > "Ntọala";
Na ala nke ibe ahụ, pịa "Gosipụta ntọala dị elu";
Na ngọngọ "Asụsụ"tinye akọrọ n'ihu ihe niile dị n'ebe ahụ.
Ihe nchọgharị gị na-arụ n'otu asụsụ.
Ọ na-emekarị na onye ọrụ ahụ gụnyere, dịka ọmụmaatụ, ihe nchọgharị nyocha nke Bekee, nke mere na ihe nchọgharị ahụ adịghị enye ịkọgharị ibe. N'okwu a, ịkwesịrị ịgbanwe asụsụ asụsụ. Edere nke a na mmalite nke isiokwu a.
Ọ dị mfe iji onye nsụgharị wuru Yandex.Browser, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị ịmụta okwu ọhụrụ, kamakwa iji ghọta ihe edere ederede n'asụsụ mba ọzọ na enweghị nsụgharị ọkachamara. Ma, ọ bara uru ịkwado maka eziokwu ahụ bụ na àgwà nsụgharị agaghị abụ ihe na-enye afọ ojuju. N'ụzọ dị mwute, nke a bụ nsogbu nke onye nsụgharị ọ bụla dị na igwe, n'ihi na ọrụ ya bụ inyere aka ịghọta ihe ihe ederede pụtara.